Mpaghara Foursquare Na-ebupụta Ozi E-mail Akuko | Martech Zone
Ihe ndekọ anyị dị ntakịrị, mana enwere m obi ụtọ ịhụ ọkwa a zuru oke na-abịa site na Foursquare na nkeji ole na ole gara aga! Nkwupụta ahụ na-enye ihe osise kwa izu na onye enyochala, ihe iru ya bụ, ma ha kekọtara nyocha, na ndị ahịa kachasị. N'ezie, enwekwara oku na-arụ ọrụ iji gbasaa ụfọdụ mkpọsa na saịtị ahụ, oke… yabụ Foursquare na-achọ ịbawanye ego ha. Kudos na akuku anọ ra nrata Otu egwuregwu, n'agbanyeghị, n'ichepụta akụkọ bara uru nye ndị ahịa ha na nke ahụ nwere ike ịba ụba ego ha.
Tags: nbanyeemailakụkụ anọ
State nke Social Media Marketing